PS4 | တွင်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်နည်း မိုဘိုင်းဖိုရမ်
ဒန်နီရယ် Terrasa | 26/11/2021 09:00 | အင်တာနက်ကို
PS4 ကစားသူများ၏ အကြီးမားဆုံးကြောက်ရွံ့မှုတစ်ခုမှာ ဂိမ်းတစ်ခု၏အလယ်တွင် အချိန်မတန်ဘဲ နောက်ကျကျန်နေခြင်းကို ကြုံတွေ့နေရခြင်းဖြစ်သည်။ ဂိမ်းထဲမှာ တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ ငါတို့ သေနတ်နဲ့ ပစ်ခံရတော့မှာ ဖြစ်သလို ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကို မသိလိုက်ဘဲ၊ ငါတို့ရဲ့ ဇာတ်ကောင်ဟာ မြေပြင်ပေါ်မှာ သေဆုံးသွားခဲ့ပြီ။ ဆက်သွယ်မှု နှေးလွန်းသောကြောင့် သူ့ကိုယ်သူ တုံ့ပြန်ရန် သို့မဟုတ် ခုခံရန် အခွင့်အရေး မရှိခဲ့ပါ။ ပြီးတော့ တစ်ခါလောက် ဒေါသတွေထွက်ပြီး တွေးမိတယ်။ PS4 ချိတ်ဆက်မှုကို မြှင့်တင်နည်း.
အကယ်၍ သင့်အတွက်ဖြစ်လျှင် (သင်၏ PS4 သည် အလွန်နှေးကွေးနေပါက) အင်တာနက်မြန်နှုန်းကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ရှောင်ရှားရန် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာများရှိပါသည်။ ဂိမ်း၏အလယ်တွင် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော နောက်ကျမှုများ သို့မဟုတ် "အေးခဲခြင်း" များ။
နှေးကွေးသော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် latency သို့မဟုတ် latency ၏ အဖြစ်အများဆုံး အကြောင်းရင်းများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည် ပြဿနာဖြစ်ပြီး အဓိက အခြေအနေ လေးခုကို ခွဲခြားနိုင်သည်-
WiFi သုံးသည့်အခါ PS4 နှေးသည်။
နှေးကွေးမှုများကြောင့် ဂိမ်းကစားခြင်းကို အနှောင့်အယှက်ပေးသည်။
PS တွင် အပ်လုဒ်နှေးခြင်း သို့မဟုတ် ဒေါင်းလုဒ်အမြန်နှုန်း။
အဝေးထိန်းကစားရာတွင် PS4 နှေးကွေးသည်။
ဘာပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ PS4 ချိတ်ဆက်မှုကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ပေါ့ပါးသွက်လက်စွာဖြင့် Play ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းနေ့ရက်များကို ပျော်ရွှင်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည့် မတူညီသောဖြေရှင်းနည်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါမည်။
1 WiFi မသုံးဘဲ ကြိုးတပ်ချိတ်ဆက်မှုသို့ ပြောင်းပါ။
2 ဒေါင်းလုဒ်များစွာဖြင့် PS4 ပြည့်ဝမှုကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
2.2 မကစားဘဲ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
2.3 အိပ်စက်ခြင်းမုဒ်တွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
3 DNS ကိုပြောင်းပါ
4 PS4 firmware ကို update လုပ်ပါ
5 သင့်ကွန်ပြူတာကို သက်တမ်းတိုးပါ (နှင့် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှု)
WiFi မသုံးဘဲ ကြိုးတပ်ချိတ်ဆက်မှုသို့ ပြောင်းပါ။
Ethernet ကြိုးကို အသုံးပြု၍ PS4 တွင် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုကို တိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ PS4 WiFi ချိတ်ဆက်မှုသည် အလွန်နှေးနေပါက၊ သင်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကြိုးတပ်ချိတ်ဆက်မှုသို့ ပြောင်းရန် စဉ်းစားပါ။ ဂန္ထဝင်ဖြစ်သော်လည်း ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်။
PS4 မှတဆင့်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်သောအခါ ဝိုင်ဖိုင်နှေးကွေးသောအမြန်နှုန်းများကို သင်ကြုံတွေ့ရသည်မှာ အလွန်အဖြစ်များပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကွန်ဆိုးလ်နှင့် router အကြား အကွာအဝေး အလွန်များသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကြားတွင် အတားအဆီးအချို့ (အပိုင်းပိုင်းများ၊ ပရိဘောဂများ) သည် ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းသွားစေသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ကြိုးတပ်ချိတ်ဆက်မှုကို အသုံးပြု၍ ဤပြဿနာများ မရှိပါ။ PS4 သည် သင်၏အင်တာနက်မိုဒမ်သို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်သည်။ Ethernet cable မှတဆင့်ချိတ်ဆက်မှုဖြင့် ၎င်းသည် ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး ပိုမိုစိတ်ချရမည်ဖြစ်သည်။ ကြိုးတပ်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုတည်ဆောက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာဖြစ်သည်-
ပထမဦးစွာ ကျွန်ုပ်တို့သည် modem ၏ LAN အပေါက်များထဲမှ Ethernet ကေဘယ်လ်ကို ချိတ်ဆက်သည်။
Después ကျွန်ုပ်တို့သည် Ethernet ကြိုး၏အခြားတစ်ဖက်ကို PS4 ၏ LAN ပေါက်သို့ ချိတ်ဆက်သည်။ကွန်ဆိုးလ်၏နောက်ဘက်တွင်ရှိသော၊
ဒါပြီးရင် သွားရမှာ "ပင်မမီနူး" PlayStation4တွင် ရွေးချယ်စရာကို ရွေးချယ်ပါ။ "ချိန်ညှိခြင်း" ။
အဲဒီမှာငါတို့အရင်ရွေးတယ် "အသားတင်" နှင့်အောက်ပါ menu တွင် option ကို "အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုကို သတ်မှတ်ပါ။"
နောက်တစ်ဆင့်က ရွေးချယ်ဖို့ပါ။ "LAN ကြိုးကိုသုံးပါ" နောက်ဆုံး option ကိုရွေးပါ "လွယ်ပါတယ်"။
ဤအဆင့်များကို ပြီးသည်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ PS4 သည် ကျန်အရာများကို လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်- ၎င်းသည် Ethernet ကြိုးကို သိရှိပြီး ကွန်ဆိုးလ်ကို အင်တာနက်သို့ ချိတ်ဆက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ PS4 ၏ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုကို သိသိသာသာ တိုးတက်စေသင့်သည်။ စတင်ကစားပြီးသည်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကိုချက်ချင်းသတိပြုမိမည်ဖြစ်သည်။
ဒေါင်းလုဒ်များစွာဖြင့် PS4 ပြည့်ဝမှုကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပြိုင်ဆိုင်မှုများ များလွန်းပါက သင်၏ PS4 ၏ အမြန်နှုန်းကို နှေးကွေးစေနိုင်သည်။
ယုတ္တိကင်းစင်သည်။ သင့် PlayStation4တွင် ဂိမ်းများစွာကို တစ်ချိန်တည်းတွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ကြိုးစားပါက၊ ချိတ်ဆက်မှု အဆင်မပြေပါ။ ပုံမှန်ထက် နှေးကွေးနေလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စစ်မှန်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အသွားအလာပိတ်ဆို။ မှု, တစ်ဆို့။ အဲဒါက အဖြစ်အပျက်ကို သရုပ်ဖော်ပုံလှလှလေးပါ။
ဒါမှ ငါတို့မကြုံရအောင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ဂိမ်းများကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။. မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ အခြားဂိမ်းတစ်ခုကို တစ်ချိန်တည်းတွင် ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနေချိန်တွင် ကစားရန်ကြိုးစားပါက အင်တာနက်အမြန်နှုန်းသည်လည်း နှေးကွေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ကွန်ဆိုးလ်သည် ဂိမ်းအများအပြားကို တစ်ချိန်တည်းတွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နေပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့ကို "တန်းစီပါ" နိုင်ပြီး မည်သည့်ဂိမ်းကို ဦးစွာဒေါင်းလုဒ်လုပ်လိုကြောင်း ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့လုပ်ဆောင်သည်-
ပထမ ဦး စွာကျနော်တို့အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "စတင်ခလုတ်" အဆိုပါ controller ကို၏။
ထို့နောက် icon ကိုသွားပါ။ "အသိပေးချက်များ" ပင်မမီနူးတွင်။ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နေသောဂိမ်းများသည် အသိပေးချက်စာရင်း၏ထိပ်တွင် ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းအပေါ် cursor ချထားပြီး PS4 ထိန်းချုပ်ကိရိယာပေါ်ရှိ "X" ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ခေတ္တရပ်လိုသောအကြောင်းအရာကို ရွေးချယ်ပါ။
နောက်ဆုံးတွင်၊ သင်ရိုးရှင်းစွာရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သောမီနူးတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ "ခဏရပ်"
နှောင့်နှေးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော စိတ်ပျက်အားငယ်မှုကို တိုက်ဖျက်ရန် နောက်ထပ် လွယ်ကူသောနည်းလမ်းမှာ ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မကစားနေစဉ် ဂိမ်းများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်နေ့တာ၏အဆုံးတွင် ဂိမ်းအသစ်တစ်ခုကို ပျော်ရွှင်စွာကစားလိုပါက၊ အလုပ်ရက်ရှည်ပြီးနောက် အနားယူလိုပါက၊ အိမ်မှမထွက်မီတွင် ပထမဆုံးသောအရာကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ထားလိုက်ပါ။
နောက်တစ်ခုက လက်တွေ့ကျတဲ့ လှည့်ကွက်ပါ။ အကြောင်းအရာကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်နေစဉ် PlayStation4ကို sleep mode တွင်ထားပါ။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို အရှိန်မြှင့်ရန်လည်း ကူညီပေးသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ သင် အောက်ပါအဆင့်တွေကို လိုက်နာရပါမယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပင်မမီနူးကိုသွားပြီး ရွေးချယ်ပါ။ "ချိန်ညှိခြင်း" ။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သည် "စွမ်းအင်ချွေတာရေး ဆက်တင်များ"
ရွေးချယ်ရမယ့် ရွေးချယ်စရာတွေကတော့ "sleep mode တွင်ရနိုင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသတ်မှတ်ပါ" ပြီးတော့ "အင်တာနက်ချိတ်ဆက်နေပါ။"
၎င်းကိုပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ထားသော home screen သို့ပြန်သွားပါ။ "အသိပေးချက်များ" အကြောင်းအရာကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နေသလားဆိုတာ ကြည့်ဖို့ပါ။ သို့ဆိုလျှင်၊ ၎င်းသည် ဒေါင်းလုဒ်ဘားဖြင့် စာရင်း၏ထိပ်တွင် ပေါ်လာလိမ့်မည်။
ပြီးရင်တော့ ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး ဖိထားရပါမယ်။ "စတင်ခလုတ်" PS4 controller ပေါ်မှာ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရွေးပါတယ်။ "အနားယူမုဒ်"
PS4 တွင် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် DNS ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါ။
El ဒိုမိန်းအမည်စနစ် (DNS) ၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာ IP (Internet Protocol) လိပ်စာများဖြင့် ဝဘ်ဆိုက်များစာရင်းကို သိမ်းဆည်းထားသည်။ DNS သည် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအတွက် လိပ်စာစာအုပ်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ပြီး IP လိပ်စာ နံပါတ်များအားလုံးကို ခြေရာခံရန် မလိုအပ်ပါ။
ယေဘူယျအားဖြင့်၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်ကွန်ရက်သို့ ပုံသေ DNS ဆာဗာကို သတ်မှတ်ပေးသည့် အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ဤဆာဗာသည် အခြားသူများကဲ့သို့ လိပ်စာများကို မြန်မြန်တင်ရန် အကောင်းဆုံးမွမ်းမံထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Google DNS သို့ပြောင်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ PS4 ၏ WiFi အမြန်နှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည် ။ သင်၏ DNS ဆာဗာကို ပြောင်းလဲနည်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ရှင်းပြသည်-
စတင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပင်မမီနူးကိုသွားပြီး ရွေးချယ်ပါ။ "ချိန်ညှိခြင်း" ။
ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွန်ရက်ကိုရွေးချယ်ပြီး ရွေးချယ်မှုကို နှိပ်ပါ။ "အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုကို သတ်မှတ်ပါ။"
အဲဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ ချိတ်ဆက်မှုကို ရွေးပြီး option ကို ရွေးပါတယ်။ "ကိုယ်ပိုင်" အထဲမှာ လမ်း၊ "လက်စွဲစာအုပ်"
အောက်ဖော်ပြပါ မျက်နှာပြင်တွင်၊ သင်သည် ရှင်းပြထားသည့်အတိုင်း ဆက်တင်များကို ချိန်ညှိရပါမည်။
IP လိပ်စာဖွဲ့စည်းမှု - အလိုအလျောက်
DHCP hostname - မသတ်မှတ်ပါနှင့်
DNS ဖွဲ့စည်းမှု - လူကိုယ်တိုင်
MTU ဆက်တင် - အလိုအလျောက်
ပရောက်စီဆာဗာ - မသုံးပါနှင့်
ဤဆက်တင်များကို ပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့်၊ ၎င်းသည် PlayStation ကိုပိတ်ကာ ပြန်ဖွင့်ရန်သာ ကျန်တော့သည်။ ထို့နောက်၊ သင်သည် ဂိမ်းဒေါင်းလုဒ်များကို ပြန်လည်စတင်သောအခါ၊ ၎င်းသည် သိသိသာသာ ပိုမိုမြန်ဆန်သောနည်းလမ်းဖြင့် လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
PS4 firmware ကို update လုပ်ပါ
Firmware ကို အပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် PS4 ချိတ်ဆက်မှုကို တိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။
အထက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းများ ပျက်ကွက်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ PlayStation4သည် Firmware ဟောင်းနေပြီဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ PlayStation XNUMX သည် နှေးကွေးလွန်းသည်ဟု ထင်မြင်လာရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Firmware သည် ဟာ့ဒ်ဝဲ၏ ကောင်းမွန်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ၎င်း၏ မှန်ကန်သော အပ်ဒိတ်သည် မြန်ဆန်သော ဒေါင်းလုဒ်အမြန်နှုန်းကို သေချာစေသည်။ ထို့အပြင် PS4 ၏ ယေဘူယျလုပ်ဆောင်ချက် ကောင်းမွန်ပါသည်။ ပြုလုပ်ရန် အဆင့်များသည် အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
PS4 ၏ start menu သို့သွား၍ ရွေးချယ်ပါ။ "Setting".
ထိုအခါငါတို့လိမ့်မည် "စနစ်ဆော့ဖ်ဝဲအပ်ဒိတ်". အပ်ဒိတ်တစ်ခုရနိုင်ပါက ၎င်းသည် အလိုအလျောက်စတင်မည်ဖြစ်သည်။
သင့်ကွန်ပြူတာကို သက်တမ်းတိုးပါ (နှင့် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှု)
QoS router များကို gaming routers များဟုလည်း ခေါ်သည်။
မင်းရဲ့အိတ်ကပ်ကို နည်းနည်းခြစ်မိရင်တောင် ငါတို့လုပ်နိုင်တာတွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ PS4 ချိတ်ဆက်မှုကို တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်သည်။ router ကို optimizing လုပ်ခြင်း။ ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေး (QoS) အင်္ဂါရပ်များ ပါဝင်သည့် ဂိမ်းများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အချို့သောဂိမ်းများ ရှိပါသည်။
ဒါဟာအစကအရေးကြီးတယ်5GHz လှိုင်းနှုန်းဖြင့် router များကို ရွေးချယ်ပါ။. ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား 2.4 GHz ထက် ပိုမြန်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော WiFi အမြန်နှုန်းများကို ခံစားနိုင်စေပါသည်။ router များသည် သတ်မှတ်ထားသော မြန်နှုန်းပမာဏကိုသာ ကိုင်တွယ်နိုင်ကြောင်း မှတ်သားထားပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဒေါင်းလုဒ်အမြန်နှုန်း 300Mbps အထိပေးစွမ်းနိုင်သော အင်တာနက်အစီအစဉ်တစ်ခုရှိလျှင် သင့် router သည် 100Mbps အမြန်နှုန်းအထိသာ ပံ့ပိုးပေးမည်ဆိုပါက ထိုပမာဏထက် မည်သည့်အခါမျှ ကျော်လွန်မည်မဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒေါင်းလုဒ်အမြန်နှုန်း 200 Mbps ဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အလိုရှိသော ကြည်လင်ပြတ်သားမှုမရှိဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ PS4 ဂိမ်းများ၏ မူလအစဖြစ်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုရှိပါသည်။ ပိုမိုမြန်ဆန်သောအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုကိုငှားရမ်းပါ။. အထူးသဖြင့် အိမ်မှာ ကစားတာ၊ အင်တာနက်သုံးတာ ဒါမှမဟုတ် တစ်ချိန်တည်းမှာ အကြောင်းအရာတွေကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်တဲ့သူတွေ အများကြီးရှိနေရင်ပေါ့။
ကျွန်ုပ်တို့၏ PS4 သို့ရောက်ရှိသည့် တကယ့်အင်တာနက်အမြန်နှုန်းကို စစ်ဆေးရန် နည်းလမ်းရှိပါသည်။ ဤအရာများသည် ရိုးရှင်းသော အဆင့်များဖြစ်သည်-
ငါတို့သွားမယ် "ချိန်ညှိခြင်း" ။
အဲဒီကနေ option ကို "ပိုက်ကွန်"
ဤစခရင်တွင် ရွေးချယ်စရာကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည်။ "ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုကို စမ်းသပ်ပါ။"
အမှန်တရားကတော့ ဂိမ်းဆော့ဖို့ သိသိသာသာ ပိုကောင်းတဲ့ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်မှု အမျိုးအစားအချို့ ရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အပ်လုဒ်အမြန်နှုန်းများကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် ရိုးရှင်းပြီး ရိုးရှင်းပါသည်- လူသိများသော ဥပမာတစ်ခု- ဂိမ်းဆော့သည့်အခါ ဖိုက်ဘာသည် ကေဘယ်ထက် ပိုကောင်းသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » အင်တာနက်ကို » PS4 တွင်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုမည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမည်နည်း
Fortnite ၏အမည် သို့မဟုတ် အမည်ကို မည်သို့ပြောင်းရမည်နည်း။
Black Friday Xiaomi- ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကမ်းလှမ်းချက်များကို အခွင့်ကောင်းယူပါ။